dimanche, 04 juin 2017 21:15
Antsirabe: Tontosa ny fifamindram-pitantanana ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria
Tontosa ny harivan’ny alarobia 31 Mey ny fifamindram-pitantanana ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria teto Vakinankaratra.
Fantatra tamin’izany fa efa mandeha ny fitoriana nataon’ny Fivmpama Antsirabe teny amin’ny fitsarana momba ny resaka tsy fanarahan-dalàna nataon’ny Fiova, izay marihina fa ireo fikambanana roa ireo no mpifaninana taty an-toerana.
Nambaran’Atoa Mandrindra Andrianjanaka, filoha teo aloha fa efa misy ny fitsarana mandeha eto Antsirabe sy any Antananarivo ary any amin’ny bianco amin’izay tsy fanarahan-dalàna hitan’izy ireo izay.
Nanambara koa i Dr Antonio, filoha vaovao fa na eo aza izany dia mandray ny asany izy manomboka izao fa ny fitsarana no manao ny asany dia ho hita eo ny tohiny.
Na izany aza dia vita am-pilaminana ny fifamindran-draharaha.
dimanche, 04 juin 2017 19:10
Andohatapenaka: Andro iraisam-pirenena ho an'ny ronono
Nototosaina tetsy Andohatapenaka tamin'ny alakamisy 1 jona teo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ronono. Fampiratiana momba izany asa izany no nanehoana ny fankalazana.
dimanche, 04 juin 2017 18:46
10ème anniversaire de la Radio et Télé Viva
Galerie Photo 10ème anniversaire de la Radio et Télé Viva, Arena 03 juin 2017.
dimanche, 04 juin 2017 18:39
RN7 Antsirabe : Sprinter sy kamiao nifampikasoka, namoizana mpandeha iray, valo hafa naratra
Olona iray no maty ary 8 hafa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana tao Vinaninkarena-Antsirabe faharoa. Fiara hihazo an’i Mananjary io niharam-boina io.
Raha ny nambaran’ireo mpandeha tsy naratra dia nandeha mafy ilay saofera izay ankevitry ny tsy za-dalana akory satria efa in-4 izy ireo no saika niharam-boina avy any Antananarivo ary dia izao tra-doza izao ihany.
Nifanena tamin’ny fiara mpitaona fasika mantsy ilay fiara ka voakasoka ny ilany ka teo ny tsy nahafehezan’ny mpamily ilay fiara ka nampivarina azy tany an-tanimbary.
Niendaka moa ny varavaran’ny fiara teo amin’ny andilany ka lehilahy iray izay nipetraka teo amin’ny seza faharoa aorian’ny mpamily no tafavoaka ny fiara ka voatsindry tao ka izay no antony nahafaty azy, ary vehivavy avokoa ny 5 tamin’ireo naratra.
dimanche, 04 juin 2017 18:29
Manakara : Mitokona ireo mpiandry fonja
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny mpitsara sy ny mpandraharahan’ny fonja eto Manakara, taorian’ny namoahan’ny fitsarana didy mamonja roa taona an-tranomaizina sazy mihatra, mpiandry fonja telo lahy tamin’ireo efatra voarohirohy ho nidaroka voafonja ao am-ponja.
Nahazo fahafahana vonjimaika ny fahaefatra. Tsy faly amin’izay ireo namany, ka dia niroso amin’izao fitokonana izao, ary asehon’izy ireo amin’ny alalan’ny sorabaventy. Sady tsy mandray voafonja vaovao, no tsy mitondra voafonja hiatrika fitsarana.
dimanche, 04 juin 2017 18:28
Trafika sy halatra lavanila : Tazomina am-ponja avy hatrany izay tratra
“Tonga dia mifonja avy hatrany alohan’ny Fitsarana azy izay rehetra tratra amin’ny trafika sy ny halatra lavanila sy ireo biby arovana”, hoy ny minisitry ny Fitsarana Andriamiseza Charles.
Nomarihiny kosa ny voalazan’ny lalàna 61.021 izay mbola manan-kery, fa mila jenera tsara ireo tantsaha mioty ny vokany na mbola tsy amin’ny fiotazana azy aza, ho fiarovany ny azy amin’ny halatra.
dimanche, 04 juin 2017 18:00
Mahajanga: Fin de cavale pour Sila, un gang notoire
Sila a été arrêté par les éléments de la Force d’Intervention de la Police, après des années de cavale pour des dizaines de crimes qu’il a commis.
Le redoutable assassin a été capturé dans un bar à Ambohimandamina, la nuit du vendredi à samedi vers 1h du matin.
dimanche, 04 juin 2017 17:59
Alain Ramaroson: Enfin un procès
Sauf changement de dernière minute, le procès d’Alain Ramaroson aura lieu mardi 6 juin à Anosy. Rappelons que ce membre de l’Opposition est détenu provisoirement à la maison d’arrêt d’Antanimora depuis le 3 août 2016.